१४ वर्ष पहिले आजकै दिन नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले युद्ध बिसाउने र नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढ्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। आजकै साँझ दुई नेताले हात मिलाउँदै देशमा १० वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्न सहमत भएका थिए।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि दलहरू प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारमा निर्वाचन गर्न सहमत भए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो। उनकै नेतृत्वको सरकारले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्योब। यो शान्ति प्रक्रियाभित्रकै एउटा प्रमुख विषय थियो। दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। संविधान जारी भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै बाँकी छ। शान्ति सम्झौताअनुसार २०६६ सालमा नै संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन।
शान्ति सम्झौताअघिसम्म माओवादी सेना 'जनपरिचालन' गरेर बस्दै आएको थियो। तर, शान्ति सम्झौताले उनीहरूलाई पनि ब्यारेकमा राख्ने निर्णय गर्योा, जसअनुसार सात मुख्य शिविर र तिनका वरिपरि तीनतीनका दरले २१ सहायक शिविर रहने सहमति भएको थियो। कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, नवलपरासी, चितवन, सिन्धुली र इलाममा मुख्य शिविर स्थापना गरिएको थियो। माओवादी सेनाका हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को निगरानीमा थिए। उक्तिकै संख्यामा नेपाली सेनाका हतियार पनि अनमिनको निगरानीमा भण्डारण गरिएको थियो।
माओवादीभित्र चुनबाङ बैठक महत्ववपूर्ण छ। २०६२ को मध्यतिर रुकुमको चुनबाङमा माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकबाट माओवादीले युद्ध बिसाउने संकेत गरेको देखिन्छ। चुनबाङ बैठकले नै पहिलो पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो। यसअघिसम्म माओवादीले जनवादी गणतन्त्रको नारा उठाउँदै आएको थियो।
चुनबाङ बैठकअघि माओवादीभित्र महत्वपूर्ण केही घटना भएका थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषय पार्टीभित्र उठाउने डा. बाबुराम भट्टराईलाई यही कारण कारबाही गरिएको थियो। उनले लावाङ बैठकमा लोकतान्त्रिक कार्यदिशाको एजेन्डा पेस गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा चालेको कदम अर्को घटना थियो। ज्ञानेन्द्रको यो कदमपछि माओवादीले २०६१ चैतमा रुकुमको खारामा रहेको सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गर्योद तर त्यसमा सफलता मिलेन। खारा आक्रमणको कमिसार दाहाल आफैं थिए।
खारापछि माओवादीले संसद्वादी दलहरूसँग छलफल बढाएको देखिन्छ। कारबाही फुकुवासँगै डा. भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा छलफलको वातावरण तयार पार्न दिल्ली पुगेका थिए। रोल्पामा एमाले नेता युवराज ज्ञवाली र वामदेव गौतमसँग माओवादी नेताहरूको भेट भइसकेको थियो। यी भेट र छलफल शान्ति स्थापनाका आधारहरू थिए। छलफलको यो शृंखला अन्ततः १२ बुँदे समझदारीको रुपमा निष्कर्षमा पुग्यो। त्यही समझदारीको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। १२ बुँदैकै धरातलमा टेकेर अहिलेसम्मको राजनीति अघि बढिरहेको छ।
यो सामाग्री नागरिकमा ५ मंसिर २०७३ मा प्रकाशित भएको थियो। सान्दर्भिक ठानेर पुन: प्रकाशन गरेका छौं ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७७ १३:०२ शुक्रबार